Malunga nathi -Zhejiang Feihu New Energy Technology Co., Ltd.
Zhejiang Feihu New Energy Technology Co., Ltd. ngumenzi wobuchwephesha kunye nelithumela ngaphandle elibandakanya uyilo, i-R & D, imveliso kunye nentengiso yezixhobo ze-lithium ezintsha. Itekhnoloji yeFiihu inezityalo zale mihla, imveliso yokuqala kunye neklasi yokuvavanya, egubungela indawo yeemitha zesikwere ezingama-30,000, indawo yokwakha yeemitha ezili-20,000. Okwangoku, kukho abasebenzi abangaphezulu kwama-400, kubandakanya iitalente eziphezulu zobungcali, umbutho onamandla kunye neqela lezentengiso
Iimveliso zethu zigubungela i-12 / 16.8v / 21V yokuzivocavoca amandla, isikrufu se-21V, isikere se-21V, isinqandi segadi encinci, umpu wokucoca uxinzelelo kunye nezinye iimveliso ezintsha. Iimveliso zethu zidlulile isiqinisekiso se-CE kunye ne-GS sele, kunye neTekhnoloji yeFeihu ikwadlulisa i-ISO9001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015. Ukusuka ekuhlolweni kwezinto ezingafunekiyo kunye nezinto kuhlolo lokhuseleko ngaphambi kokuba imveliso ishiye umzi-mveliso, yonke inkqubo ilawulwa ngokungqongqo ngoochwephesha bokuqinisekisa umgangatho weemveliso zodidi lokuqala
Efektri yethu ibekwe kwisixeko Jinhua, kufuphi ningbo kunye Shanghai port, ukuthuthwa lula ukuthunyelwa kunye nokutyelela. Inethiwekhi yokuthengisa igubungela ngaphezulu kwama-60 amazwe kunye nemimandla kwihlabathi liphela, njenge-Southeast Asia, South Asia, Middle East kunye nezinye. Ukuqinisekiswa komgangatho kunye nokwoneliseka kwabathengi zizinto eziphambili kwinkampani yeTekhnoloji yeFeihu.
Sineenkqubo zolawulo lomgangatho wolawulo kunye negumbi lebhu, ngaphezulu kweeseti ezingama-20 izixhobo zokuvavanya ukuqinisekisa ukuba zonke iimveliso zinomgangatho olungileyo ngaphambi kokuthunyelwa. Feihu Technology isekelwe ukholo elungileyo, unikezelo olwaneleyo lweempahla, ogqibeleleyo inkonzo yasemva ukuthengiswa njengoko ingqiqo, kwaye iphumelele indumiso eliphezulu kubarhwebi yonke
Siyakumema ngokunyanisekileyo ukuba usityelele kwaye ujonge imveliso yethu, ulawulo lomgangatho kunye nomthamo wefektri.